गरे के हुँदैन, अचार बेचेरै मासिक डेढ लाख आम्दानी ! - Everest Dainik - News from Nepal
गरे के हुँदैन, अचार बेचेरै मासिक डेढ लाख आम्दानी !
भद्रपुर, भदौ ९ । सीप र जागर भयो भने सानो लगानीले स्वदेशमै मासिक रु एक लाखदेखि दुई लाखसम्म कमाउन सकिन्छ, भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएको छ, झापा अर्जुनधारा–९ का उद्यमी दिनानाथ शिवाकोटी ।
उनले आफ्नै घरमा ‘शिव बाबा’ अचार उद्योग सञ्चालन गरेर विभिन्न २० परिकारका उत्पादन बजारमा ल्याएका छन् । दश वर्षअघि रु पाँच लाख पूँजी लगानी गरेर साना तथा घरेलु व्यवसायको रुपमा शुरु गरिएको अचार उद्योगबाट उहाँले अहिले कम्तीमा मासिक रु एक लाख ५० हजार आम्दानी गरिरहेको बताए ।
उनको उद्योगमा उत्पादित अचारको माग स्थानीय बजारमा मात्र नभएर हेटौँडा, पोखरा र काठमाडौँ बजारमासमेत बढ्दै गएको छ । उद्योगबाट वार्षिक १० हजार किलोग्राम विभिन्न ब्राण्डका अचार उत्पादन हुँदै आएको छ ।
अहिलेसम्म रु ५० लाख लगानी भइसकेको सो उद्योगमा आठ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अचार बनाउन धेरै लगानी नचाहिने र बजारमा सजिलै बिक्री हुने भएकाले महिला दिदीबहिनीले सीप सिकेर यस्ता आयमूलक व्यवसायमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
याे पनि पढ्नुस वाम गठबन्धनका कार्कीसँग झापा १ मा कांग्रेसका युवा नेता शर्मा भिड्ने
उद्योगकै लागि भनेर ठूला ठूला दुई कोठे पक्की भवन उनले निर्माण गर्नु भएको छ, भने एउटा भवनमा अचार उत्पादन हुन्छ र अर्कोमा तालीम सञ्चालन हुने गरेको छ । उहाँको उद्योगमा अकबरे दाना, अकबरे पेस्ट, टिमुर–लसुनको पेस्ट, अकबरे–तामा, मिक्स आचार, कागती दाना, कागती पेस्ट, किबी, स्याऊ, मेथीको पेस्ट, करेला लगायतका विभिन्न फ्लेवरका अचार बन्ने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आगलागीबाट दुई करोडको क्षति
अर्जुनधारा नगरपालिकाका कृषि अधिकृत सालिकराम भट्टराईले शिवाकोटी झापाको अचार उद्यमी मात्र नभएर एउटा कुशल प्रशिक्षक भएको बताउछन् । शिवाकोटीले विगत पाँच वर्षदेखि पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा सय भन्दा बढी समूहलाई अचार बनाउने तालमि प्रदान गरिसक्नु भएको छ ।
भद्रपुरस्थित साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सात वटा अचार उद्योग दर्ता भएको जनाएको छ ।
ट्याग्स: achar, jhapa